Taqiullah Khan Oo Sheegay Inuu 25 Sano Oo Xidhiidh Ah Uu Xajiyey – HCTV
Ahmed Cige 0	August 7, 2019 2:33 pm
Dubai, (HCTV) – Taqiullah Khan oo u dhashay dalka Hindiya ayaa sheegay in markii ugu horaysay ee uu Xajka tagaa ay ahayd sanadkii 1994-kii. Ninkan oo degan Bengaluru ayay da’diisu tahay 62 jir, kaas oo sheegay inuu xajiyey 25 tan iyo wakhtigaasi.
Waxaanu Mr Khan uu wakhti xaadirkan uu dib ugu noqday Makkah isagoo markii 26aad soo xajayada, sida ay baahisay Warbaahinta Khaleejtimes oo HCTV uu ka soo xigtay.
Ninkan u dhashay dalka Hindiya ayaa intaasi ku daray inuu sidoo kale uu soo Cumraystay in ka badan 126 jeer.
Badi dadka Muslimka ah ayaa safarkan barakaysan inta noloshooda ah ugu baxa hal mar arimaha kharashka awgeed, balse Mr Khan ayaa arintan sanad kasta u baxa, waxaanu uga mahad celiyey shirkadaha socdaalka iyo safarka.
“Waxaan imanayey halkan sanado badan waxaan u garanayaa Makkah iyo Madina in ka badan sida ay u yaqaanaan dadka soo jeeda Bengaluru ee dalka Indi,” ayuu yidhi Mr Taqiullah Khan.
Markii Ugu Horaysay Xajka
Arinta xiisaha leh, Khan hooyadii ayaa sheegtay in xaju uu u noqday isaga mid sanad kasta uu u baxo.
Waxaana sanadkii ka horeeyey markii ugu horaysay ee uu Khan uu xajiyo, uu u diray waalidkiisa Xajka sanadkii 1993-kii.
“Waxaan ka codsaday inay iigu soo duceeyaan inaan awoodo inaan booqdo oon u socdaalo dhulka barakaysan. Markii hooyaday soo noqotay, waxay ii sheegtay inay iigu soo ducaysay ducadan gaarka ah, sidii ay aaminsanayd inaan marar badan xajiyo oo sanad kasta ah.”
Sidii hooyadiis saadaaliyay, safarkiisa Khan wuxuu bilaabay 1994. “Waxaan u tegey sidii Xaaji oo kale (Xajka) sida qof kale oo muslim ah oo kale markaa. Waxaan dib ugu laabtay mar kale sannadka dambe xaaskeyga.”
Wuxuu aasaasay Tawakkul Tours iyo Travels sanadkii 1996 wuxuuna dalbanayay qoondada Haj. Wuxuu ilaa iyo imminka u imanayay sidii hage Haj.
Saddexda aabbe uma baahna inay u yimaadaan magaalada quduuska ah iyadoo ay weheliso kooxaha ay shirkaddiisu mas’uul ka tahay. “Aniga ahaan, tani waa sharaf ka timid xagga Allah mana iloobi doono adduunka. Dadka badankood waxay naftooda u arkaan inay nasiib leeyihiin haddii ay awoodaan inay safraan hal mar noloshooda oo dhan.
Khan wuxuu kaloo hogaamiyaa ugu yaraan shan urur Umrah sanad walba magaalada barakaysan.
Wuxuu hayaa wax la yidhaahdo laysanka Munazzam, kaas oo la siiyaya qabanqaabiyeyaasha Haj. “Marka waad aragtaan, Allah aad buu iigu barakeeyey in tani dhab ahaantii tahay rootigayga iyo subagga,”
Xaaskiisa iyo laba ka mid ah seddexdooda caruurta ahi way xajeen sidoo kale.
Khan ayaa mar uun seegay Xajka 1999 ilaa 1994. Wuxuu la kulmay shil mooto, waxaanay xiligaasi dhakhtarkiisu ka codsaday inuu ka fogaado safarka adag.
“Laakiin wali waxaan qabtay 25 jeer 25 sano gudahood Gregori maxaa yeelay waxaan nasiib u yeeshay inaan helo laba xujay sanadkii 1996.”
Sannadkaas, Dhul Hijjah – waa jadwalka taariikhda islaamiga ee safarka loo maro – wuxuu laba jeer yimid 1996: January iyo Disember.
Shirkadda Khan ayaa sanad walba hesha kootada 100 xujaaj ah. “Markan, kootadayadu waxay kordheen 7, Alxamdulilaah.”
Khan wuxuu sheegay inuu bilaabo u diyaar garowga xilliga Haj sida ugu dhakhsaha badan bisha soonka ee Ramadaanka. “Taasi waa markii dawladda Hindiya ay ku dhawaaqday kootada”.
Khan awooda ugu weyn waa qoyskiisa. “Waxay si weyn u taageereen dadaalkeyga. Marna maysan iga weeydiinin inaan qof kale ku hogaamiyo kooxahan maadaama ay sidoo kale aaminsan yihiin inay tahay sharaf.”